Prometheus In The New Age: အမေစုပြောတဲ့ "ဒီမိုကရေစီ"
တစ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကျင့်သုံးနေတဲ့အစိုးရများ (Totalitarian) အများစုကတော့ ပြောင်းလဲမှုကို ကြောက်ရွံ့နေမှာဘဲဖြစ်သည်။ တစ်ပါတီ အာဏာရှင်များအနေနှင့် စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးကို တုန့်ဆိုင်းနေသည်နှင့်အမျှ သူတို့၏ အပြုသဘော ဆောင်ရွက်ချက်များ သည်ပင်လျှင် အလာဟသ ပျက်ယွင်းသွားနိုင်သည်။ နိုင်ငံ့ပေါ်လစီအောင်မြင်ခြင်းသည် ပြည်သူတို့၏ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိုတဲ့ စိတ်ဆန္ဒ အပေါ်တွင်သာ မူတည်သည်။
ဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများသည် အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုကို ဆန့်ကျင်နေသည်ဟု ပြောဆို နေသည်များ လည်းရှိသည်။ လူများကလည်း အစိုးရအတွက် “ မသင့်တော်ပေဘူး ” ဟု ထင်မြင် လာအောင်လုပ်နေသည်များလည်းရှိသည်။ အမှန်တရားနှင့်အလွန်ဝေးကွာနေသော အရာမရှိပါ။
Shared by ..Blogger Demowaiyen, Blogger Alinsek & Blogger Kamikaze
18. October. 2010
Posted by အလင်းဆက် at 8:16 PM